Madaxweynaha Turkiga oo si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Turkiga oo si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde
Madaxweynaha dalka Turkgia Recep Tayyip Erdoğan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdiho, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen Madaxda sare ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Recep Tayyip Erdoğan ayaa si wada jir ah salaam sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana kooxda baambeyga Muusikada ay u astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan Turkiga.
Labada Madaxweyne ayaa lagu wadaa in ay xariga ka jaraan Terminal-ka cusub ee ay dowladda Turkiga ka hirgelisay garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde iyo isbitaalka digfeer oo lagu sameeyay dib u dhis iyo qalabeyn casri ah.
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa ku sugan Guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Ra’iisul wasaaraha Dalka Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Guddoomiyaha gobolka benaadir ahna duqa Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab”, diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixan doono wajiga labaad mashaariic horumarineed, maadaama wejigii koowaad la soo gabo gabeeyay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhismaha isbitaalka Digfeer iyo qalabeyn, dhismaha Terminal-ka iyo tan waddooyinka.
Wasiir Beyle “Booqashada Madaxweynaha Turkiga waxa ay noo tahay mid taariikhi ah”
Madaxweyne Xasan “Madaxweyne adiga iyo wafdiga kula socda markale ku soo dhawaada Soomaaliya” DAAWO
Madaxweyne Xasan "Madaxweyne adiga iyo wafdiga kula socda markale ku soo dhawaada Soomaaliya" DAAWO